Muungaab iyo Kay oo wadahadal ka yeeshay doorashada Dowladda Hoose ee Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 17 March 2015
Mareeg.com: Gudoomiyaha gobolka Banaadir, Xasan Maxamed Xuseen “Muungaab” iyo Ergayga Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Danjire Nickolas Kay ayaa maanta kula ku yeeshay Muqdisho.
Gudoomiye Muungaab iyo Kay ayaa ka wada hadlay arimo dhowr ah oo ay igu muhimsaneed qaabka doorashada dowlada Hoose iyo sidii caasimadda Soomaaliya loogu sameyn lahaa maqaam gooni ah si ay wax ula qeybsato wadanka intiisa kale.
Danjire Kay oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in gudoomiyaha xilligaan haya hogaanka gobolka Banaadir uu wax badan qabtay.
“Waxaan Gudoomiyaha gobolka Banaadir uga Mahadcelinayaan Mudadadii sanadka aheyd oo xilka hayey sida wanaaagsan oo uga shaqeyay arimaha horumarinta, iyo wacyigelinta bulshada Soomaliyeed aniga waxaan Marqaati ka ahay in Maamulka gobolka Banaadir uu qabtay wax cad oo la taaban karo” ayuu yiri Danjire Kay.
Muungaab ayaa dhankiisu u mahadceliyey danjire Kay, wuxuuna yiri “Waan ugu mahadcelinaynaa sida uu mar walba u soo booqdo xarunta maamulka gobolka ee degmada Heliwaa waana arin farxad leh in uu Kay sidaa sameeyo”.